Tartankii ICC oo la baajiyey xilli Kooxaha Barcelona iyo Real Madrid loo sheegay lacagaha ay khasaareen – Gool FM
(Yurub) 11 Abril 2020. Waxaa la baajiyey tartankii ciyaaraha isdiyaarinta xilli ciyaareedka ee International Champions League (ICC), kaasoo ay kooxuhu dheeli jireen xilliyada fasaxa, waxaana in la kansalo ka dambeysa in caabuqa Coronavirus uu adduunka oo dhan si weyn ugu faafay.
Relevent Sports Group oo ah qaban-qaabiyeyaasha ICC ayaa shaaca ka qaaday in sanadkan 2020 aan la ciyaari doonin ciyaarihii ay kooxaha qaaradda Yurub u qaban jireen, isla markaana lagu ciyaari jiray Maraykanka iyo Asia, laakiin ay dib u bilaabi doonaan ciyaarahaas sanadka dambe.
“Caafimaadka iyo badqabka ciyaartoyda, shaqaalaha, taageereyaasha iyo dhammaan dadka ku lugta leh ciyaaraha ayaa mar kasta muhiim ah.” ayaa lagu yiri War-saxaafadeed ay soo saareen Relevent Sports Group.
Maadaama aysan kala caddayn waqtiga la qaadayo xannibaadda ah in bulshadu ay meel isugu timaaddo waxa ay qaban-qaabiyeyaashu sheegeen inay taasi hubanti la’aan ka dhigayso jadwalka ciyaaraha caalamiga ah.
Yeelkeede, waxa ay ballanqaadeen inay sanadka dambe ee 2021-ka ay Asia iyo Maraynkanka ku qaban doonaan kulammo ay isugu keeni doonaan Kooxaha ugu magaca weyn.
Waxaa tartanka ICC sanadkan ku jiray oo qorsheysnaa inay wada ciyaaraan kulan El Clasico ah kooxaha Barcelona iy Real Madrid oo ay ku dheelaan dalka Maraykanka, iyadoo kulankaasi uu ku jiro kuwa baaqday.
Si kastaba ha noqoteen Wargeysyada ciyaaraha ka faallooda ee ka soo baxa Spain ayaa sheegaya lacagaha ay khasaari doonaan Kooxaha Real Madrid iyo Barcelona, waxaana kooxaha Spain ka wada dhisan ee Barca iyo Los Blancos ay mid waliba waayi doontaa lacag dhan 18 milyan oo euro oo ay ku heli lahayd kulankaasi El Clasico.